Fidinana eny ifotony nataon’ireo mpitantana ato amin’ny IFVM – Valala
Ho fanaraha-maso ny toe-javamisy eny ifotony, ny fivoaran’ny fisian’ny valala, ny asa famonoam-balala, ny fijerana ireo miaramilam-balala isan-tsokajiny, fiaraha miasa amin’ireo olom-boafidy sy olom-panjakana eny ifotony sy ny maro hafa; dia nanatanteraka fidinana ifotony ireo tompon’andraikitra ambony rehetra ato amin’ny IFVM. Izany dia ao anatin’ny indrindra ny asa fampiodinana ny Foibe. Ho an’ireto mpitantana ny IFVM ireto dia tsy vitan’ny eo ambony birao fotsiny ny asa famonoam-balala fa tsy maintsy midina eny ifotony, mijery ny zava-misy marina ary koa mampahery ireo mpiara miasa izay tsy mandry andro tsy mandry alina miady sy mamono ireo fanetribe ny firenena ireo.
Hita fa mafy tokoa ny sedra sedrain’ireo miaramilam-balala ireo, ny tsy fandriampahalemana, ny sakafo tsy zarizary sy ny maro hafa. Tsy irery anefa izy ireo fa mijery azy ireo tokoa ny tompon’andraikitra ato amin’ny IFVM.
Tena ao anatin’ny ady tokoa ny ekipa rehetra amin’izao volana febroary sy martsa 2020 izao; amin’ny ankapobeany dia somary milamina ny fivoaran’ny valala raha oharina tamin’ny taona lasa. Tsy mbola nisy toerana nahitana andiam-balala na andian-kijeja hatramin’izao. Renim-balala lehibe (L3, L4) no miparitaka amin’izao fotoana izao ary mbola mandeha irery avokoa izy ireo. 45 509ha ny velarantany rakotra valala ary ny 40 662ha amin’ireo no efa voadaroka nandritra ny volana febroary sy martsa; ny faritra Atsimo Andrefana, ny faritra Menabe ary ny faritra Sofia no tena ahitana velaran-tany rakotra indrindra amin’izany.
Ny Zone Sakaraha sy ny Zone Ihosy no notsidihin’Atoa Tale Jeneraly sy ny ekipany ny 21 ka hatramin’ny 23 janoary 2020, ary ny Zone Ampanihy sy ny Zone Ambovombe ny 13 ka hatramin’ny 19 febroary 2020. Toy efa fanaon’ireo mpitantana dia mijery ny fizotran’ny asa fandarofana, manome torolala, manaramaso ny asa amin’ny ankapobeny no ataon’izy ireo. Amin’ireo toerana andalovana dia misy hatrany ny fivoriana miaraka amin’ireo ekipa any an-toerana; tsy hadino ihany koa ny famporisihana sy ny fankaherezana indrindra ireo miaramilam-balala.
Ny ekipa niaraka tamin’i Tale Teknika kosa dia nitsidika ny toeram-pandarofana iray ao Ankilivalo Sakaraha ny 21 ka hatramin’ny 25 febroary 2020 ary ny toeram-pandarofana ao Antevamena Ankiliabo ny 01 ka hatramin’ny 05 martsa 2020. Amin’ny maha Tale misahana ny ara-teknika azy dia ny lafiny ara-teknika no jerena sy arahi-maso akaiky. Hatreto aloha dia tsy mbola misy atahorana ny fivoaran’ny fisian’ny valala amin’ny ankapobeny.
Direction du Système d’Information et de la Communication:
Ny Zone Manja no notsidihan’Atoa Talen’ny Fifandraisana sy ny ekipany ny 11 ka hatramin’ny 19 febroary ary nitsidika ny Faritra Alaotra mangoro kosa izy ireo ny 21 ka hatramin’ny 23 martsa 2020. Tsy ny faritra fitomboan’ny valala ihany no arahi-maso fa ao koa ireo faritra ivelany toy izany i Aloatra Mangoro. Manana ny solon-tena miara miasa amin’ny Foibe (DRAEP) ireo Faritra ivelany ireo, indrindra manamafy ny fiaraha-miasa amin’izy ireny no anton’ny fidinana ifotony toy izao.
Ny ekipa notarihin’Atoa Talen’ny fandraharahana kosa indray dia nitsidika ny toeram-pandarofana tao Basibasy Commune Antanimeva ao anatin’ny Zone Befandriana Atsimo ny 26ka hatramin’ny 29 febroary 2020. Fanaraha-maso ny fampitaovana ny fandarofana no atao amin’izany, fa indrindra koa famatsiana ireo zavatra ilaina amin’ny fanatanterahana ny fandarofana.
Accueil chaleureux du nouveau Directeur Technique de l’IFVM